परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई पुजा किन गरिन्छन्? जान्नकोलागि पढ्नुहोस्,एक शेयर गर्नुहोस् ! – kollywood hungama
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई पुजा किन गरिन्छन्? जान्नकोलागि पढ्नुहोस्,एक शेयर गर्नुहोस् !
एजेन्सी/परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
वेद मा उल्लेख भएअनुशार:
पौराणिक कथा अनुसार:
यसकारण श्री शिवमहापुराण सृष्टिखंड अनुसार सृष्टि काे पालनकर्ता विष्णु ले एक पटक, सृष्टि काे रचयिता ब्रह्मा काे साथ निर्गुण-निराकार-अजन्मा ब्रह्म(शिव) काे प्रार्थना गर्नु भयाे ‘भाेलेनाथ हजुर कसाेगरी प्रशन्न हुनुहुन्छ’ प्रभु शिव ले भन्नुभयाे, ‘यदि मलाइ प्रसन्न गर्ने हाे भने शिवलिंग का पूजा गर्नु । जब जब कुनै प्रकार काे संकट या दु:ख हुन्छ शिवलिंगमा पूजा गर्नाले समस्त दु:ख काे नाश हुन्छ । जब देवर्षि नारद ले श्री विष्णु लाइ श्राप दिय र पछि पश्चाताप गर्नु भयाे तब श्री विष्णु ले नारदजी लाइ पश्चाताप काे लागी शिवलिंग काे पूजा, शिवभक्तकाे सत्कार, नित्य शिवशत नाम काे जप गर्न बताउनु भयाे ।धार्मिक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो।
Previous सोमबारको दिन के गर्दा भगवान शिवलाई खुशी बनाउने विधि जान्नुहोस् ! पढ्नुहोस् सबैले एक शेयर गर्नुहोस् तपाईंको मनोकामना पुराहुनेछ।
Next पिपललाई विधिपूर्वक पुजा गर्दा घरमा सुख शान्ति आउँछ? पुजा गर्ने विधि जान्नुहोस्